10 SIROOD oo kaa dhigaya qof da’diisa ka yar oo hillaacaya! (Raac awaamiirtan) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka 10 SIROOD oo kaa dhigaya qof da’diisa ka yar oo hillaacaya! (Raac...
10 SIROOD oo kaa dhigaya qof da’diisa ka yar oo hillaacaya! (Raac awaamiirtan)
(Hadalsame) 30 Maajo 2019 – Ma doonaysaa inaad qurux badnaato oo aad ekaato qof da’diisa ka yar markasta? Haday jawaabtu “Haa” tahay fiiro gaar ah u yeelo qodobadaan uu daryeelmagazine.com akhristayaashiisa la wadaagayo.
In qofku uu maalin kasta cabbo ugu yaraan laba litir oo biyo iyo dareeraha /sharaabka laga sameeyo dhirta iyo sharaabka kalaba ahi waxa ay saamayn fiican ku leedahay wax-qabadka unuygada maskaxda iyo weliba qaabka muuqaal ee maqaarka. jirka banii-aadamka waxa uu badankiis ka kooban yahay dareere, hadduu jirka ku yaraado biyaha waxaa isbadala muuqaalka qofka, waxaana ka muuqdo da’ uusan qofka gaarin.
5. Ka fogow balwadda:
Cabbista sigaarku waxay kordhisaa cimri deg-dega, sigaar cabbistu waa caado u daran caafimaadka waxayna soo dedejisaa gabowga iyo calaamadihiisa.waa la isku raacsan yahay in sigaarku uu keeno cimri degdeg, taasi waxay ka timaadaa sunta sigaarka ee “Nicotine” iyo fitamiin yarida nuuca “C” oo badanaa ku dhacdo dadka sigaarka caba, kaasoo muhiim u ah difaaca iyo tayeynta jirka. sidoo kale cabbista khamriga waxay toos u dhaawacdaa jirka, waxay waxyeellaysaa beerka, maqaarka, indhaha iyo xididada intaba.
7. Maaree welwelkaaga: Welwelku waxa uu ka mid yahay xanuunnada nafsiga ah ee khatarta ku ah caafimaadka maskaxda iyo jirka labadaba. Sidaa awgeed waxaa muhiim ah in qofku uu ku dadaalo in naftiisa uu ka adkaado, mar kastana intii awooddiisa ah yareeyo walwalka iyo niyad-jabka uu ka qaadayo arrimaha nolosha ee sida uu jeclaan lahaa u dhici waaya. Haddii uusan qofku sidaa yeelin sida ay khubarada caafimaadku caddeeyeen waxa uu halis u yahay in isaga oo aan weli da’deedii gaarin ay calaamadaha gabowgu dhaqso uga soo if baxaan.
Xeeldheerayaal ku takhasustay maqaarka oo ka tirsan Jaamacadda California ee dalka Maraykanka ayaa caddeeyay in kiriimada la isku qurxiyo iyo waliba waxyaabaha kale ee koofeeradu ama burkiyeerradu ku qurxiyaan jirka ay ku jiraan maaddooyin marka uu jirku barto soo dedajiya kaduudka iyo calaamadaha muujiya da’da. Sidoo kale waxa uu keenaa in uu qofku qaado Allergic uu maqaarku ka qaado qorraxda una adkaysan kari waayo kulkeeda.
Qorraxdu aroorta hore iyo galab dhaca in ay jirka ku dhacdaa waxa ay u fiican tahay caafimaadka qofka. Laakiin waxaa jira fallaaraha qorraxda kuwo khatar ku ah caafimaadka oo afka qalaad lagu yiraahdo ‘ultra violet rays (UV)’ haddii fallarahani jirka gaaraan waxa keenaan gabowga oo qofka ku soo degdega.
10. Iska yaree cunista macmacaanka:
Dadka joogteeyo cunista sokorta, aadne u jecel waxyaabaha macmacaan, waxaa jirkooda ku dhaco wax loo yaqaano “Glycation”, tan oo dhaawac u geysato murqaha, seedaha iyo unugyada jirka khaasatan kuwa maqaarka, tan waxay keentaa in jirku yeesho laalaab, haddii aad macaanka jeceshahay ku dadaal khudrada iyo furutada, iskana ilaali sokorta badan.
Previous articleFILASUUFKII FOOWDADA AHAA: ”Waxay doonaysey in madaxayga laga fiirsado muuqaalka Shaydaanka!!”
Next articleSAWIRRO: Booliiska oo iskugu soo baxay laba atoore oo Hindi ah oo la moodey inay is qarxinayaan (Sababta)